खेलाडी होस् या राजनीतिकर्मी, सबैले देश र जनताको हित हुने काम गरौं - उमेश गुरुङ - Sitemap
Loading... खेलाडी होस् या राजनीतिकर्मी, सबैले देश र जनताको हित हुने काम गरौं - उमेश गुरुङ जीवन संघर्षको मैदान हो, यहि मैदानमा जीवनका हरेक अनुवभ साट्दै एवं सम्हाल्दै, आफ्नो नामलाई देश, विदेशमा समेत रोशन चिनाउदै ।
खेलहरु त् अरुपनि थिए तर यहि खेल चाहिँ किन रोज्नु भयो ? म अरुभन्दा अलि जिद्दी स्वाभावको भएकाले अरुले गर्न नसक्ने , गर्न नजान्ने काम गर्न खोज्थे, साच्चै यो खेल विश्वमा नै प्रसिद्ध छ । यो खेलले प्रतिरक्षा गर्न सिकाउँछ र शारीरिकका सबै अंगहरु तन्दुरुस्त राख्छ । त्यति मात्र नभएर आत्माविश्वासी र साहसी बनाउछ । जसकारण मैले यो खेल रोजेँ ।
तपाईले खेल खेलिसकेपछिको अवस्थामा के – कस्ता उपलब्धि हासिल गर्नुभयो ? २०५६ सालमा भएको राष्ट्रिय गेममा वेस्ट टुर्नामेन्ट च्याम्पियनसिपको उपाधि हात पारे । त्यो मेरालागि सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय स्तरको ठुलो उपलब्धि थियो । त्यस्तै २०५४ सालमा भएको नेशनल गेममा मेरो साथी गोविन्द श्रेष्ठसंग खेल खेल्दा रिंगभित्र मेरो किक लागेर नकआउट भएको थियो, त्यो क्षण मेला लागि निकै दुखद क्षण बन्न पुग्यो । मैले उपाधि जितेपनि साथी घाइते भएकोमा दुखित भएको थिए ।
म राजनितिमा सहभागी हुनुको कारण भनेको समाजसेवा गर्नकै लागि हो । युवावर्ग र नेतृत्वलाई सुधार्न, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न, सामाजिक परिवर्तन गर्न, खेल जगतलाई सुधार गर्नुका साथै समग्र देश विकासका लागि काम गर्न नै म राजनीतितिर लागे । धेरै खेलाडीहरुले राजनीति मन पराएको देखिदैन तर तपाई कुनै एक पार्टीको झण्डामुनि किन ?